1 O Teofilo,+ asɛm a edi kan a mekyerɛwee no, mekyerɛɛ nneɛma a Yesu fii ase yɛe na ɔkyerɛkyerɛe nyinaa,+ 2 kosii da a wɔfaa no kɔɔ soro,+ bere a na ɔnam honhom kronkron so de ahyɛde ama asomafo a wapaw wɔn+ no. 3 Afei nso bere a ohuu amane akyi no, ɔnam adanse bebree so de ne ho kyerɛɛ wɔn sɛ ɔte ase,+ ma wohuu no adaduanan, na ɔkaa Onyankopɔn ahenni ho asɛm.+ 4 Bere a ɔne wɔn hyiae no, ɔmaa wɔn ahyɛde sɛ: “Mummfi Yerusalem,+ na mmom monkɔ so ntwɛn nea Agya no ahyɛ ho bɔ+ a motee ho asɛm fii me hɔ no; 5 efisɛ Yohane de, nsu na ɔde bɔɔ asu, nanso ɛrenni nna pii na wɔde honhom kronkron+ abɔ mo asu.” 6 Afei, bere a wohyiaam no, wobisaa no sɛ: “Awurade, saa bere yi na wode ahenni+ no resan asi hɔ ama Israel anaa?” 7 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnyɛ mo de sɛ mubehu mmere anaa nna+ a Agya no ahyɛ wɔ n’ankasa tumi mu;+ 8 na mmom sɛ honhom kronkron no ba mo so a mubenya tumi,+ na mobɛyɛ m’adansefo+ wɔ Yerusalem+ ne Yudea ne Samaria+ nyinaa de akɔ asase ano nohoa.”+ 9 Ɔkaa eyinom wiei a wɔrehwɛ no no, wɔmaa no so kɔɔ soro+ na omununkum kataa ne ho na wɔanhu no bio.+ 10 Na bere a ɔrekɔ+ a wɔrehwɛ ewim haa no, hwɛ! mmarima baanu bi a wɔhyehyɛ ntade fitaa+ begyinagyinaa wɔn nkyɛn, 11 na wɔkae sɛ: “Galilea mmarima, dɛn nti na mugyinagyina ha rehwɛ soro yi? Yesu a wɔafa no afi mo nkyɛn kɔ soro yi bɛba sɛnea moahu sɛ ɔrekɔ soro no ara pɛ.”+ 12 Ɛnna wofii bepɔw bi a wɔfrɛ no Ngo Bepɔw a ɛbɛn Yerusalem so san kɔɔ+ Yerusalem; efi hɔ rekɔ no yɛ homeda kwan.*+ 13 Enti, woduu hɔ no, wɔkɔɔ abansoro dan no mu,+ faako a na wɔte no, Petro ne Yohane ne Yakobo ne Andrea, Filipo ne Toma, Bartolomeo ne Mateo, Alfeo ba Yakobo ne Simon a ɔyɛ nsiyɛfo no, ne Yakobo ba Yuda.+ 14 Eyinom nyinaa de koma koro kuraa mpaebɔ mu+ a na mmea+ bi ne Yesu maame Maria ne afei ne nuanom+ ka ho. 15 Afei nna no mu no, Petro sɔre gyinaa anuanom (nnipakuw a na wɔn nyinaa dodow bɛyɛ ɔha ne aduonu) no mfinimfini kae sɛ: 16 “Mmarima, anuanom, na ɛsɛ sɛ kyerɛwsɛm a honhom kronkron+ nam Dawid anom so ka siei no ba mu wɔ Yuda+ a ɔkyerɛɛ wɔn a wɔkyeree Yesu+ no kwan no ho,+ 17 efisɛ na ɔka yɛn ho,+ na onyaa ɔsom adwuma yi mu kyɛfa.+ 18 (Enti, saa ɔbarima yi de amumɔyɛ ho akatua+ tɔɔ+ asase, na bere a ne ti bɛwɔɔ hɔ+ no, ne mu paee ma ne nsono nyinaa puei. 19 Wɔn a wɔtete Yerusalem nyinaa nso hui, enti wɔfrɛɛ asase no wɔn ankasa kasa mu Akeldama, a ase ne Mogya Asase.) 20 Na wɔakyerɛw wɔ Nnwom nhoma no mu sɛ, ‘Ma ne tenabea nnan amamfõ, na mma obiara nntena hɔ,’+ na ‘Ne hwɛfo adwuma no, ma obi foforo nyɛ.’+ 21 Enti mmarima a na wɔne yɛn hyiam bere a Awurade Yesu wɔ yɛn ntam a ɔredi akɔneaba+ 22 fi bere a Yohane bɔɔ no asu+ kosi da a wɔfaa no fii yɛn nkyɛn kɔɔ soro+ no, ɛho hia sɛ saa mmarima yi mu biako ka yɛn ho yɛ ne wusɔre ho dansefo.”+ 23 Enti woyii wɔn mu baanu begyinaa hɔ, Yosef a wɔfrɛ no Barsaba a wɔtoo ne din Yusto no, ne Matia. 24 Na wɔbɔɔ mpae kae sɛ: “O Yehowa, wo a wunim nnipa nyinaa koma mu,+ kyerɛ mmarima baanu yi mu nea woapaw no 25 sɛ ɔmfa ɔsom adwuma ne asomafodwuma+ a Yuda wae fii ho faa n’ankasa kwan so no.” 26 Enti, wɔbɔɔ wɔn so ntonto,+ na ntonto no sii Matia so; na wɔkan no kaa asomafo dubiako+ no ho.
Na eyi bɛyɛ basafa 2,000 (mita 890; anammɔn 2,920). Fa toto Yosua 3:4 ho.